दुधकासी आमैको गाउँमा – Pramb's Weblog
मार्च 20, 2011 by PRAMB
दुधकासी आमैको गाउँमा
जिप त घलेगाउँको आँगनमै पुग्दो रहेछ । ढुंगे घर अनि गाउँलेको निश्चल मुहार । बख्खु ओढेका मानिस काखीमा हात च्याप्दै जिउ कुप्रो बनाएर गोरेटा घुमिरहेका ।
शब्द/तस्बिर विनिता दाहाल
दुधकासी आमैको गाउँ
ठिहिर् याउँदो कलंकीबाट बिहान ६ बजे सुरु भएको यात्रा । सामुन्ने फर्किएर माइक्रोमा उँघिरहेकी नवदुलही । शिरदेखि पाउसम्मै सजिएकी । हाम्रा घुँडा खप्टिएर बसेका छन् तर उनी अर्धनिद्राबाट अलिकति पनि मतिर चिहाउँदिनन् ।
माइक्रो उपि्रुँदा उनको टाउकोमाथिको डन्डीमा ठोकिन्छ । देख्दा मलाई चसक्क हुन्छ । उनको आखाँले निद्राबाट अलिकति चिहाए पनि मुन्टो फेरि ओइलाएको कर्कलोजस्तो झुकिहाल्छ । डुम्रे पुगेपछि गोरखा मोडिने बाटोमा माइक्रोले तोडले चक्का घुमायो । उनको टाउको सँगैको केटाको छातीमा अडेसियो । केटो असजिलो मान्न थाल्यो । अपरिचित केटाको छातीमा महिलाको टाउको अडिएको देखेर यात्रु खित्खिताउन थाले ।
‘अहो सरी दाइ,’ कस्तो आँखै नखुलेको ।
‘आँखा नखुल्दा झर्ने ठाउँ नै कटिएला नि,’ अधिवक्ता रामकुमार न्यौपानेले भने ।
‘माइती आउन लाग्यो अब त चाहेर पनि निदाउन सक्दिनँु उनले हतासिँदै बाहिर हेरेर भनिन् । पहिलोपटक उज्यालो अनुहारमा माइती शब्दलाई जोड दिएर कुरा सुरु गरिन् ुहिजो यता आउने भनेर अबेरसम्म सामान मिलाउन थालेँ निद्रा पुगेकै थिएन ।’
पट्यारलाग्दो सहरी जीवनको दैनिकी । पुस अन्तिम साता । योग दिवस मनाउन लमजुङको घलेगाउँ जाने प्रस्ताव आयो । योगगुरु हरिप्रसाद पोखरेलसहित उनका दर्जन चेला माघेसंक्रान्तिमा लमजुङ जाँदै रहेछन् । मैले प्रस्ताव टार्न सकिनँ किनकि त्यो गाउँ मेरा लागि नयाँ थियो ।
त्यही यात्रामा भेटिएकी निर्जना वाग्ले । डुम्रेबाट माथि गएदेखि नै झोलाको सुन्तला बाँड्दै उनले माइतीदेशको बेलिविस्तार लाउन थालिन् । घरपरिवार नयाँ दुलाहा सबैको । ‘दुई घन्टा हिँडेर माथि उक्लनुपर्छ । उराठलाग्दो सल्लाका हिउँदे रुखबाहेक अरु केही देखिन्न । तैपनि माइती जाने भनेपछि चेलीका खुट्टै नअडिने ! यात्रा सकिनै लागेको रहेछ । बेसीसहर पुग्नुभन्दा १५ किलोमिटर वर भोलिपल्टको माघेसंक्रान्ति निम्तो दिएर उनी बिदा भइन् ।
लमजुङ जिल्ला उत्तरकन्या गाविसमा पर्ने घलेगाउँ । योग दिवस मनाउन हिँडेका हामी । ६ घन्टाको माइक्रो यात्रापछि पुगियो सदरमुकाम बेसीसहर । गुरु पोखरेलसँग अघिल्लो दिनै बेसीसहर पुगेका साथी खाना खाँदै रहेछन् । त्यो मध्यदिन खानाभन्दा म रामकुमार दाई र मणि दाइले सुन्तला रुचायौं । हरियो पात नै झर्न नभ्याएका रसिला सुन्तला एक किलोका दरले बुत्याइयो । जिपमा घलेगाउँसम्म जाने तयारी भइसकेको रहेछ । घलेगाउँ पनि के गाडीमा जानु ! तैपनि एकलकाटे हुन भएन ।
गुड्दै हामी उकालियौं । जति उकालियो त्यति हिमाल नजिक आइपुग्ने । हिउँदे धुलो बेवास्ता गर्दै हाम्रो चारघन्टे यात्रा पुरा भयो । जिप त घलेगाउँको आँगनमै पुग्दो रहेछ ।
गुरुङबस्ती घलेगाउँ २०७०मिटर को सान त्यही उत्तरपूर्वी कुनाको हिमाल रहेछ । बाइसे-चौबिसे राज्य कालमा घले राजाले राज्य गरेकॊ गाउँको बनावट लोभलाग्दो छ । बिहान सूर्यको मिर्मिरे किरण हिमाल हुँदै सोझै गाउँ आइपुग्छ । सुन्तला रङको लालिमाले गाउँ नै िसंगारिएजस्तो ।
ढुंगे घर अनि गाउँलेको निश्चल मुहार । बख्खु ओढेका मानिस काखीमा हात च्याप्दै जिउ कुप्रो बनाएर गोरेटा घुमिरहेका । गाउँको प्रवेशद्वारमै देखिने ठूलो बोर्डले भन्छ । यो पर्यटकीय गाउँ हो । गाउँको थप जानकारी दिन हामीसँगै छन् कृष्ण ओलिया दाइ ।
हुन पनि अचेल वर्षमा करिब ५ हजार आन्तरिक पर्यटक आउँदा रहेछन् गाउँमा । उनीहरु सामान्यतः एक रात बस्छन् ।
आउनुको आफ्नै विशेषता छ । गाउँलेहरु चामलको सेतो टिका र फूलको माला लगाएर पाहुनाको स्वागत गर्छन् । गाउँलेसँगै उनीहरुकै घरमा बस्न पाउँछन् पाहुना ।
हामी सबै धुलाम्मे भएका थियौं । नुहाउन मन लाग्यो । तर त्यो जाडोमा आँट आएन ।
मैले बास पाएको घर विशेष लाग्यो । आमा र हजुरआमा उमेरका दुई आमामात्रै । दुई दिनका लागि ८४ वर्षे दुधकोसी आमाको आँगनमा पुगेँ । उनकी बुहारीको नामचाहिँ माइली । माइली आमाले मेरो झोला समाउँदै सोधिन् ुकस्तो धुलैधुलो भएको नुहाउने हो ु गाउँमा सोलारबाट तातोपानी आउने सार्वजनिक बाथरुम रहेछ । नुहाएपछि आफैंले आगो फुक्दै पकाएको मरिच चिया ।
अधिवक्ता विन्दा पाण्डेसहित हामी चार महिला थियौं । माइली आमालाई उनीहरुले सघाउँदै बेलुकीको खाना पाक्यो । मैले भने एकनास ती वृद्धालाई हेरेँ । त्यो उमेरमा पनि काम गर्ने कस्तो जाँगर !
मेरो देब्रेपट्टि बसेर उनले एकसुरमा ठूलो हँसियाले आलु ताछिन् । चामल भिजाइन् ।
भारतीय सेनामा भर्ती भएका श्रीमान बितेपछि उनलाई मासिक ९ हजार पेन्सन आउँदो रहेछ । माइली आमाको श्रीमान पनि सेनामै रहेछन् । वर्षको दुईपटक घर फर्कन्छन् । यसैगरी बेलायती र भारतीय सेनामा धेरै घले गुरुङले रोजगारी पाएकाले यो गाउँ आर्थिक हिसाबले सम्पन्न रहेछ । सबै घरका ढोकानजिकै पिँढीमाथि लाहुर गएकाहरुको ठूलो तस्बिर सजाइएको हुँदो रहेछ । दुधकासी आमाको दुईदिनको दैनिकी हेरेर लाग्यो- तिनै तस्बिर जोगाउन उनी त्यो घरको चौघेरा नाघेर निस्केनन् । बिहानबेलुका अगेनाछेउ र दिउँसो आँगनमा घामको पारबाहेक उनको दैनिकी नभएको वर्षौं भइसक्यो । लोकल रक्सीको मसिनो गन्ध उनको मुखबाट आइरहने ।
बिहानै हामीले चियाबगान र उत्तरकन्या मन्दिर दर्शन गर् यौं । उत्तरकन्यामा माघेसंक्रान्तिमा मेला लाग्छ । मुर्तिबिना पानीको मुहानमात्रै भएको मन्दिरमा सबैले परेवा जोडी र त्रिशुल चढाउने चलन रहेछ । हामीले पनि दर्शन गर् यौं । योग दिवसको दिन मन्दिरलाई थुप्रैले आर्थिक सहयोग गरे । योगगुरु पोखरेलले योगको महŒव’bout प्रवचन दिए । योगको असर उनको सालिन अनुहारमा देख्न सकिन्थ्यो । स्थानीयले हाम्रै अनुरोधमा घाटुनाच देखाए । मैले मनलागे जति फोटा खिचेँ । बिना छेकबार बेफिक्रण् हिमालपहाड हेर्न म गाउँको यो कुनो र त्यो कुनो गर्न थालेँ । यो गाउँबाट दर्जनजति हिमाल देखिन्छन् ।
प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक मौलिकता बोकेको यो गाउँ सूर्योदय हेर्न प्रख्यात मानिन्छ । गाउँ आउने पाहुनालाई प्रत्येक घरघरमा २÷२ जनाका दरले बाँडेर राखिन्छ । उनीहरुलाई प्रायः गाउँघरमै पाइने खाना खुवाउने चलन । सिस्नो निउँरो कोदाको रक्सी ढिँडो कोदाको रोटी सेलरोटी गुन्दु्रक लोकल चामलको भात कुखुराको मासुजस्ता परिकार बनाएर खुवाउने ।
हामीलाई गाउँलेले माघेसंक्रान्तिमा झिलझिले सेल वनतरुल खुवाए ।
घलेगाउँ यत्तिकै रमणीय थियो । मरिच हालेको कालो चिया पिउँदै मैले माइली आमा र कासी हजुरआमासँग राति थुप्रै बेर कुरा गरेँ । अबेर सुते पनि मिठो निद्रा परेको थियो । आकाश गड्याङगुडुङ गर्न थाल्यो । ठूलै पानी छिट्याएको मैले सानो झ्यालबाट बाहिर देखेँ । उज्यालो हुँदै जाँदा ओम भन्दै कराएको सुनियो । हामीसँगै गएका दुई भाइले हिउँ परेको खुसियालीमा डाँडामा गएर पो योग गर्न थालेछन् !
चिसो भए पनि म पनि हिउँ खेल्न पूर्वको फुच्चे डाँडामा उक्लिएँ । ओहो ! हामी हिँड्दै आएको त्यो धुलाम्मे बाटो ल हिउँले सेताम्मै भएछ । माइली आमाको पछ्यौरालाई उडाउँदै हामीले फिल्मी फोटा खिच्यौं । हिउँमा मन लागेका नाम÷शब्द लेख्दै बिहान दुई घन्टा बित्यो । आज त काठमाडौं फर्किने दिन । हिउँले गाडी आउने सम्भावना थिएन । म मनमनै खुसी थिएँ । अब हिँड्न त पाइन्छ ।
दर्किएको पानीमा हामी एकनास तीनघन्टा ओरालो झर् यौं । जम्मा ल्याएको एकजोर लुगा पनि बेसीसहर पुग्दा पुरै भिज्यो । त्यही चिसो लुगामा के बेसीसहर बसिरहनु । हामी चिसै लुगामा बल्लबल्ल माइक्रोमा सिट पाएर फर्कियौं काठमाडौं । कानमा पुराना गायक गुन्जिरहे । बेसीसहरबाट डुम्रे आएपछि मैले निर्जनालाई सम्झेँ । उनी त्यति प्यारो गरेर पहिलोपटक एक्लै आएको माइतीलाई दुईदिनमै बाई गरेर घर फर्किन् होला त ?
This entry was posted in नागरिक घुमफिर and tagged Advocate,Ghale Gaun,Maghe Sankranti,Snow falling,Trekking,Yog Guru. Bookmark the permalink.
← महिलामैत्री राज्य बन्न चुनौती
भोलि संसार बिउझिँदा मेरो आजको असफलता मेटियोस्…. →
One thought on “दुधकासी आमैको गाउँमा”
Bishal | मार्च 20, 2011 मा 8:45 बिहान
daami chha ho.